Xagee lagu bixiyaa lacagtii ciidamada iyo shaqaalaha maamulka Puntland??
Saturday October 27, 2018 - 02:47:14 in Wararka by Galgala News
Madaxweynaha maamul goboleed Puntland Cabdiweli Gaas ayaa raba inuu geed dheer & geed gaaban ba u fuulo sidii dib loogu dooran lahaa, isaga oo isticmaalaya dhaqaalaha maamulka. Waxaana doorashada ka dhiman wax ka yar 90 maalmood.. Shaqaalaha iyo ciidamada maamulka Puntland ayaa in dhaweyd wax mushaharaad ah la siin. Mushahar la’aanta ciidamada ayaa sababtay in ciidamada madaxtooyadu kala xidhaan wadooyinka magaalada Garoowe.
Sidoo kale waxa hore u dhacday in mid kamid ah ilaalada Cabdiweli Gaas & dareewalkii hore ee madaxweyne ku xigeenka Puntland ay la kala baxsadaan baabuur ay leedahay madaxtooyada maamulka.
Cabdiweli ayaa lacago faro badan ku bixiyey qaar kamid rag isga ka ag-dhow oo uu rabo inay noqdaan xildhibaano si ay hadhow isaga u doortaan. Waxaana ragaas kamid ah Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo ah agaasimaha saxaafada ee madaxtooyada & Mukhtaar Cabdisalaan oo ah xoghayaha Cabdiweli Gaas..
Cabdirashiid iyo Mukhtaar oo ah labada nin ee ugu awooda badan madaxtooyada Puntland isla-markaana lagu bixiyey lacagaha ay xaqa u lahaayeen ciidamada iyo shaqalaaha ayaa kasoo kala jeeda gobolada Sanaag iyo Bari. Waxayna iminka ku mashquulsan yihin sidii ay uga mid noqon lahaayeen xildhibaanada soo socda…